मंगलवार, २१ श्रावन २०७६,	आहाखबर	3.72K
भारतले कश्मीरको स्वायत्त अधिकार कटौती गरेपछि नै दक्षिण एसियाली राजनीतिमा नयाँ तरंग देखिएको छ ।
यसलाई लिएर पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले कडा टिप्पणी गरिसके । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई नै यसबारे ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।
धारा ३७० !
भारतको संविधानको धारा ३७० अहिले परिमार्जन गरिएको हो । यस धारा अन्तर्गत ३५ ए खण्डमा कश्मीरलाई दिइएको विशेषाधिकार खारेज गरिएको हो ।
भारतको संविधानको धारा ३७० अन्तर्गत ‘कश्मीर भारतको अभिन्न अंग’ उल्लेख भएकाे खण्ड भने कायम छ । ३५ ए खारेज गरेसँगै कश्मीरले अलग चिन्ह, अलग झण्डा, नागरिकता र कानुन उपभोग गर्न पाउने छैन ।
विवादितमा जम्मू–कश्मीर ?
भारत र पाकिस्तान विभाजनका बेला कश्मीरी मुस्लिम पाकिस्तान तर्फ जाने अनुमान थियो, तर स्वायत्तताको शर्तमा भारतमा मिसिए । त्यो बेलासम्म त्यहाँ कश्मीरी राजा थिए । पाकिस्तानले पनि पूर्ण कश्मीरमा दाबी रहँदै आएको छ ।
हिमाली क्षेत्र जम्मु–कस्मिर ‘विवादास्पद भुभाग’ हो भनेर भारत– पाकिस्तान दुवैले स्वीकार्दै आएको विषय हो । यो पूरै क्षेत्रलाई दुवैले आ–आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएका छन् । फुटाउ र राज गरको नीति लिएको अंग्रेजले दक्षिण एशिया छाडेर जाँदा सन् १९४७ मा कस्मिरमा विवादको बिउ रोपेको थियो । अहिलेको द्वन्द्व त्यसकै परिणाम हो । कस्मिर द्वन्द्वमा घ्यू थप्ने काम चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा पछि भएका हुन् ।
अमेरिकासँग कस्तो कनेक्सन ?
त्यस्तै, भारत र पाकिस्तानबीच विभिन्न समयमा कस्मिर विवाद सल्टाउन प्रयास भएका थिए । यसअघिका भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयी हुन् वा मनमोहन सिंह सबैको समयमा द्विपक्षीय रुपमा समाधान खोज्ने कोसिस भएको थियो । त्यतिबेला विभिन्न तत्वहरुले चलखेल गरी वातावरण बिगार्ने काम भयो । शान्तिपूर्ण समाधान निस्किएन ।
धारा ३७० किन खारेज ?
लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टीले धारा ३७० अन्त्य गर्ने बताउँदै आएको थियो । भारी बहुमतले विजयी भएको भाजपा सरकारले पुनः सत्तामा आएको केही महिनामै घोषणा पत्रमा रहेको धारा ३७० सम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा गरेको हो ।
धेरै कश्मीरीवासिन्दालाई यो लाग्छ कि, भाजपा कश्मीर भन्दा बाहिरका लागि सम्पत्ति किन्ने अधिकार प्रदान गरेर मुस्लिम बाहुल्य राज्यमा मुस्लिमहरुलाई अल्संख्यक बनाउन चाहन्छ ।
यस्तै सरकारको यो कदमले प्रधानमन्त्री मोदी कश्मीर र पाकिस्तानप्रति कठोर छन् भन्ने पनि स्पष्ट देखिएको छ ।
(विभिन्न एजेन्सीकाे सहयाेगमा)